China 120 Steel frame formwork orinasa sy mpamatsy |Lianggong
120 vy rafitra rindrina formwork no karazana mavesatra manana hery avo.Miaraka amin'ny vy hollow-section mahatohitra torsion toy ny frame miaraka amin'ny plywood avo lenta, 120 frame wall formwork dia miavaka amin'ny androm-piainany faran'izay lava sy vita amin'ny simenitra tsy miovaova.
120 Rafitra vy ao anatin'izany ny plywood, tsy mila fanamboarana mialoha ny rafitra.
Ampiasaina indrindra ho an'ny karazana rindrina rehetra toy ny rindrina Hetezana, rindrina fototra ary koa ho an'ny habe isan-karazany amin'ny tsanganana ho an'ny haavo isan-karazany.
Ny rafitra rafitra vy 120 dia rafitra vy vita amin'ny vy, izay vonona hampiasaina ary tena mafy.
Ny takelaka 3.30m, 2.70m ary 1.20m dia manana sakany isan-karazany manomboka amin'ny 0.30m ka hatramin'ny 2.4m miaraka amin'ny elanelana 0.05m na 0.15m ny haben'ny sakan'ny tontonana dia azo ampiharina amin'ny fahombiazan'ny fampiharana rehetra.
Ny rafitra rafitra vy 120 rehetra dia mifototra amin'ny mombamomba ny famokarana mangatsiaka ho an'ny sisiny.Thes sisiny profil dia voaomana amin'ny endrika manokana ao anatiny izay mamela ny fampiharana ny alignment Couple.
Ny lavaka dia omena ao amin'ny profil sisiny mitsangana, ny fampifanarahana marina amin'ny tontonana natsangana dia azo atao amin'ny alàlan'ny fidiran'ny mombamomba ny sisiny amin'ny fampiasana crowbar (na fantsika-remover).
Ny takelaka plywood matevina 18mm dia tohanan'ny barany mpanelanelana valo na folo mitovy endrika.Manolotra fahafaha-manao maro ihany koa izy ireo amin'ny fametahana kojakoja rafitra rafitra vy 120.Voaloko tanteraka ny rafitra vy.
Ny tontonana rehetra dia azo atambatra amin'ny fomba isan-karazany, mandry amin'ny ilany na mijoro mahitsy.Izy ireo koa dia azo apetraka amin'ny fandaharana staggered satria ny fifandraisan'izy ireo dia tsy miankina amin'ny modely misy refy.
Ny halalin'ny tontonana 12cm dia miantoka ny fahaiza-mitondra enta-mavesatra (70 KN/m2) Ka tsy tokony hojerena ny tsanganana tokana misy 2,70 sy 3,30 metatra ny haavony, ny tsindry sy ny tahan'ny fametrahana simenitra.Ny plywood 18mm matevina dia apetaka in-7 ary rehefa mipetaka amin'ny rindrina masonry.
Ny singa rehetra dia vonona hampiasaina rehefa tonga eo amin'ny toerana.
Ny mombamomba manokana izay avy amin'ny frame, mampitombo ny tanjaky ny tontonana ary miantoka ny fiainana maharitra .Amin'ny alàlan'ny profil miendrika manokana sy clamps iray mitsoka, ny fifandraisana tontonana dia tena mora & haingana.
Ny fifandraisana amin'ny tontonana dia tsy miankina amin'ny lavaka eo amin'ny mombamomba ny frame.
Ny frame dia manodidina ny plywood ary miaro ny sisin'ny plywood amin'ny ratra tsy ilaina.Ny clamps vitsivitsy dia ampy ho an'ny fifandraisana henjana.Izany dia miantoka ny fanafohezana ny vanim-potoanan'ny fivoriambe sy ny disassembly.
Ny rafitra dia manakana ny rano hiditra ao amin'ny plywood amin'ny sisiny.
120 Rafitra vy dia ahitana rafitra vy, plywood tontonana, manosika misintona prop, scaffold bracket, alignment coupler, fanonerana waler, tie tsorakazo, manainga hook, sns.
Ny takelaka plywood dia vita amin'ny plywood wisa endrika manana kalitao avo lenta .ny rafitra vy ao anatiny dia vita amin'ny vy mangatsiaka miforona manokana.
Ny fanonerana waler dia manamafy ny henjana mitambatra amin'ny toerana misy ny fampifandraisana tontonana.
Mora miasa, maivana lanja, mora fitahirizana sy fitaterana.
Amin'ny fampiasana ireo singa tafiditra ao amin'ny rafitra fototra dia ho afaka hamaha ny olana amin'ny formwork amin'ny fananganana indostrialy sy trano ianao.
Ny ampahany tafiditra ao anatin'ireo singa fanampiny dia manitatra ny fahafaha-miditra amin'ny formwork ary manatsotra ny fanaovana beton.
Ny zoro tsy mahitsizoro dia azo fehezina fotsiny amin'ny zoro hinged sy ny zoro ivelany.Ny elanelana fanitsiana ireo singa ireo dia mamela zoro zoro oblique, manitsy ny mpikambana manonitra ny hatevin'ny rindrina tsy mitovy.
teo aloha: 65 Rafitra vy
Manaraka: Fiara fametrahana Arch